November 23, 2020 - Babal Khabar
Nov232020 by बबाल खबरNo Comments
भारतीले आफुले गाँ’जा पि’उने ग’रेको कुरा स्वीकार गरेकी छिन् । एनसीबीले गाँ’जा रा’खेको आरोपमा चर्चित हास्य कलाकार भारतीलाई प क्राउ गरेको छ । शनिबार, एनसी बीले मुम्बईमा ३ स्थानमा छापा मारेपछि गाँ’जा फे’ला पारेको थियो । हास्य कलाकार भारती र उनका पति हर्षको घरमा पनि छापा मार्दा गाँ’जा समातिएको थियो । भारतीको फ्ल्याटबाट उक्त गाँ’जा ब’रामद भएको हो । भारती सिंह र उनका पति हर्ष लिम्बाचियालाई एनसीबीले बोलाएको थियो । लामो सोधपुछपछि भारतीले गाँ’जा से’वन ग’रेको कुरा स्वीकार गरेकी छिन् । यद्यपि हर्षलाई सोधपुछ गर्ने क्रम जारी रहेको छ । भारती द कपिल शर्मा शो की चर्चित कलाकार हुन् । अब उनि शोमा रहने न रहने भन्ने कुरा अन्यौल भएको छ । पछिल्लो जानकारी अनुसार एनसीबीले भन्यो कि भारतीको घरबाट ८६.५ ग्राम गाँ’जा ब’रामद गरिएको छ । साथै, सोधपुछको क्रममा ती दुबै जनाले गाँ’जा हो भनेर स्वीकार पनि गरेका छन् ।
हाम्रो हिन्दु शास्त्रका अनुसार हरेक पशु, पन्छी कुन न कुनै देवी–देवतासँग सम्बन्धित हुन्छन्। यस कारण उनीहरुको पूजा गर्ने गरिन्छ। तर पूजा बाहेक पनि यी समस्त प्राणीको हाम्रो जीवनमा अर्को महत्वपूर्ण स्थान छ। यस्तो मान्यता छ की यी सबै प्राणी हाम्रो जीवनबाट दुर्भा ग्यलाई हटाएर सुख र समृद्ध लिएर ल्याउँछ। ज्योतिषी र वास्तु अनुसार कुन पशु र पन्छीको तस्वीर लगाउँदा लाभ मिल्न भन्ने बारे आज हामी जानकारी गराउँदै छौँ। घरको कुन दिशामा कसको तस्वीर लगाउने ? पढनुहोस पुरा खबर गाई गाईमा ३३ कोटी देवी,देवताहरुको बास हुने मान्यता छ। त्यसकारण गाईको तस्वीर घर या पसलको मन्दिरको उत्तर,पुर्व दिशा पारेर लगाउनाले दुर्भाग्य नास हुन्छ। त्यस्तै गाइलाई लक्ष्मीको रुस पनि मानिने गरिएकाले उत्तर,पुर्व दिशा पारेर तस्वीर लगाउँदा धनको कम महशुस हुँदैन्। कछुवा कछुवा भगवान विष्णुको कच्छप अवतारको प्रतिक मानिन्छ। यसको तस्
पानी जिवनका लागि अत्यावश्यक तत्व हो । पानी बिना हामि जीवनयापन गर्न सक्दैनौ ।पर्याप्त पानी पिउनु मानव स्वास्थ्यका लागि अनिवार्य कुरा पनि हो तर पानी पिउनुछ भन्दैमा खाना खाइरहेको बेला पानी पनि पिउनु स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुँदैन, यसले स्वास्थ्यमा अस र गर्दछ । खाना खाइरहेको बेला पानी पिउनाले स्वास्थ्यमा पर्ने अ सर यस्ता छन्ः १.खाना खाँदै, पानी पिउँदै गर्नाले पेटमा अम्लियपना बढ्दछ । जसले खाना पच्दैन र एसिडि टीको समस्या आउँछ यसले पेट दुख्ने सम स्या पनि बढ्छ । २. खानासँगै पानी पिउनाले सरीरको मेटाबोलिज्म सुस्त हुन्छ,जसका कारण सरीरमा पर्याप्त उर्जा प्रवाह हुँदैन र मोटोपना बढ्दछ । ३.खानासँगै पानी पिउनाले खानेकुरा राम्रोसँग पच्न पाउँदैन,जसका कारण क ब्जियतको सम स्या आउँछ । ४. खाना खाने बेला पानी पिउनाले डा इबेटिज को खत रा पनि बढ्छ । ५.सरीरमा युरिक एसि को मात्रा बढ्दछ । जसले मृ गौला तथा
कर्कट राशि : यो राशी भएका महिलाहरु जिद्दी हुन्छन् । साथै अरुलाई सहजै मनाउन सक्ने खुबी यिनीहरुमा हुन्छ । घर परिवारमा हुने हरेक कार्यको निर्णयमा आफ्नै प्रभाव जमाउने खालका हुन्छन् । श्रीमानलाई मनाउन यिनलाई कुनै कठिनाई हुँदैन । कर्कट राशि भएका बुहारीले घरमा राजनै गर्छन् । वृश्चिक राशी: यो राशी भएका महिलाहरु अफ्ठ्यारो परिस्थतिमा रुष्ट रहेका व्यक्तिलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सक्ने क्षमताका हुन्छन् । यस राशिका महिलाहरु आफ्नो पतिलाई पनि आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने गर्छन् । पतिको कुरा सुन्दै परिवारमा राज गर्ने यस राशिका महिलाहरु आफ्नो कुरा राख्न अलिकति पनि डराउदैनन् । परिवारको हरेक कार्यमा आफै हावी हुने आदत यिनीहरुमा हुन्छ । सिंह राशि: यो राशी हुने महिला व्यवहारमा अत्याधिक जिद्दी मानिने र आफ्नो पतिलाई जिद्दीलेनै नियन्त्रणमा राख्न सक्षम हुने गर्छन । कर्मघरमा हुने हरेक कार्यमा आफ्नो संलग्नता काय